Baarlammaanka Kenya oo ansixiyey in 8% laga dhigo cashuurta shidaalka - Halbeeg News
Baarlammaanka Kenya oo ansixiyey in 8% laga dhigo cashuurta shidaalka
NAIROBI (HALBEEG) – Baarlammaanka Kenya ayaa meel mariyey in 8% laga dhigo cashuurta laga qaado shidaalka, kaddib dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo cashuur kordhinta dowladdu shidaalka ku samaysay oo maalmihii u dambeeyey ka dhacayey qaybo kamid ah dalka Kenya.
Afhayeenka Baarlammaanka Kenya Justin Muturi ayaa sheegay in Goluhu meel mariyay soo jeedinta Xukuumadda ee ahayd in 8% laga dhigo cashuurta shidaalka ee Kenya.
Go’aanka Baarlammaanka ayaa khasab ka dhigaya in muwaadiniinta Kenyaanku hadda kaddib bixiyaan canshuurta la raaciyo iibka ee (VAT)ka, kaddib markii xog ururin ay sameeyeen qolyaha isgaarsiinta iyo tiknoolojiyaddu lagu ogaaday in dadka Keenyaanku awoodi karaan bixinta cashuurtan dheeriga ah.
Afhayeenka Baarlamaanka Kenya ayaa qaddar 15 daqiiqo ah joojiyay kulanka, kadib markii qaar kamid ah mudaneyaasha baarlammaanku muran geliyeen natiijada ra’yi aruurinta laga sameeyay internetka.
Soo jeedinta canshuurta ayaa ansax noqotay kadib markii ay kuu guul dareysteen xildhibaannadii kasoo horjeeday in ay gaaraan tiradii la rabay ee aheyd 233 cod.
Xeer hoosaadka Baarlammaanka Kenya ayaa dhigaya in 233 xildhibaan soo xaadiraan kulanka, markii la rabo in loo codeeyo barnaamij sidan oo kale ah.
Xildhibaannada arrintan kasoo horjeeday qaarkood ayaa buuq iyo sawaxan bilaabay markii Afhayeenka Baarlamaanku ku dhawaaqay natiijada kasoo baxday cod bixintii laga sameeyay internetka.
Qaar kamid ah xildhibaannada ayaa la maqlayay iyagoo cod sare ku leh “Muturi oo marka af Soomaali loo rogo noqonaysa ‘ha dhaco’
Canshuurta raacda iibka shidaalka (VAT) ayaa bishan September 1deedii laga dhigay 16%, go’aankaas ayaana horseeday bannaan baxyo waaweyn oo ka dhacay qaybo kamid ah Kenya, inkastoo markii dambe Madaxwaynaha Kenya Uhuru Kenyatta hoos u dhigay cashuurta shidaalka kana dhigay 8%.
Xubnaha Baarlammaanka Kenya ee mucaaradka ku ahaa qorshahan ayaa doonayay in codeynta dib loo dhigo, balse afhayeenka ayaa meel marinta xeerkan awood dheeri ah u adeegsaday.
Dadweynaha Kenya qaybtood ayaa weli kasoo hor jeeda canshuurta dheeriga ah ee shidaalka, iyagoo ku andacoonaya in arrintani adkayn doonto soo helidda nolol maalmeedka.
Xukuumadda oo ansixisay in Soomaaliya ku biirto Axdiga Caalamiga ah ee Naafada
TANZANIA: Tirada dadka ku dhintay doontii ku degtey harada Victoria oo korortay